Misimisy kokoa momba ny Redmi miaraka amin'ny Snapdragon 855: fambara naseho | Androidsis
Ireo mpankafy Redmi dia miandry fatratra ny fahatongavan'ny Telefon-tsolika Redmi ampiasain'ny Snapdragon 855. Ny tena anaran'ilay telefaona dia eo am-pelanony ankehitriny, fa ny fantatra dia hanolotra fahombiazana avo lenta amin'ny vidiny ambany dia ambany izy io. Na izany aza, voalaza fa azo antsoina "Redmi Pro 2".
Raha hanohy hiresaka momba ilay fitaovana, amin'ity fotoana vaovao ity, nisy mpampahalala sinoa iray, izay tsy tapaka tamin'ny famoahana vaovao momba ireo finday avo lenta, nizara ny Fepetra lehibe momba ny Redmi miaraka amin'ny SD855.
Raha ny filazan'ny mpampahalala, Ny saikan'i Redmi dia hanana efijery diagonaly 6.39-inch Ary, ahoana no mety hitranga raha tsy izany, ny sehatra finday Snapdragon 855 dia hampandeha ny telefaona miaraka amina RAM 8 GB. Ho setrin'izany, ho tonga ny telefaona miaraka amin'ny tahiry anatiny 128 GB.
Spekle an'ny Redmi tafaporitsaka amin'ny Snapdragon 855
Mba hisamborana tena, ny avo lenta dia hanana fakantsary eo anoloana 32-megapixel. Ny akorany aoriana amin'ny finday dia hasiana fananganana fakan-tsary telo izay hanisy sensor 48-megapixel voalohany, sensor faharoa 8-megapixel, ary solomaso fahatelo 13-megapixel.
Ny sasany amin'ireo fiasa amin'ny smartphone Redmi SD855 dia efa nohamafisin'ny Redmi CEO Lu Weibing sy ny mpitantana Xiaomi hafa. Araka ireo, ny fitaovana dia hanana fanohanana ny fifandraisana NFC ary hanana jack audio ihany koa.
Weibing koa dia nilaza fa tsy ela akory izay ny telefaona Redmi miaraka amin'ny SD855 dia fitaovana iray andrasanasatria hanolotra fampisehoana tsaratsara kokoa, fakan-tsarimihetsika tsara kokoa ary tahan'ny efijery ambony amin'ny vatana.
Tsy misy fanamafisana eo amin'ny fisehon'ny efijery finday. Noho izany, Mbola ho hita eo raha toa ny fanatanjahan-tena an-telefaona fampisehoana tsy misy takona na lavaka ao anatiny.. Ity dia mety ho teknolojia AMOLED ary mampifandray mpamaky rantsan-tànana eo ambaniny, na dia tsy nanamafy ireo pitsopitsony ireo aza ny mpampita.
Ary farany, vinavinaina fa ny smartphone Redmi miaraka amin'ny Snapdragon 855 dia mety ho ofisialy amin'ny Mey na Jona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Misimisy kokoa momba ny Redmi miaraka amin'ny Snapdragon 855: naseho ny antsipiriany